रोनाल्डो लड्नबाट बालबाल जोगिए! | Hamro Khelkud
रोनाल्डो लड्नबाट बालबाल जोगिए!
म्यासेडोनिया (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडका सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफुलाई सम्हाल्न नसकेको भए आज म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध हुने युइएफए सुपर कपको फाइनल गुमाउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो । टोलीको बसबाट ओलर्ने क्रममा आज चिप्लिएका रोनाल्डोले आफुलाई समयमै सम्हाल्न सकेका कारण उनी लडेनन् र चोट लाग्नबाट जोगिए ।
बसको ढोकाको सिढीमा राखिएको टावेलमा रोनाल्डो चिप्लिएका थिए, तर उनी आफुलाई त्यत्तिनै छिटो सम्हाल्न सफल भए । रोनाल्डो युनाइटेडविरुद्धको टोलीमा समेटिएका छन् । रियलले रोनाल्डोको पूर्व क्लब युनाइटेडको सामना गर्दैछ । युरोपियन लिगको सिजन सुरु हुँदा च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग विजेताबीच हरेक बर्ष सुपर कप हुने गर्दछ । रियल च्याम्यियन्स लिग र युनाइटेड युरोपा लिग विजेता हुन् ।
३२ वर्षे रोनाल्डो अघिल्लो साताबाट मात्र टोलीमा समावेश भएका हुन् । टोली प्रि सिजनका लागि अमेरिका भ्रमणमा रोनाल्डो थिएनन् । कन्फेडेरेसन कपमा भाग लिएपछि उनी विदामा बसेका थिए । यसबीचमा उनका जुम्ल्याहा सन्तान भएका थिए भने उनीले कर छलिको अभियोगमा अदालतमा जवाफ पनि दिनु परेको थियो ।